192.168.8.1 - Liyini ikheli le-IP elizenzakalelayo?
An Ikheli lephrothokholi ye-inthanethi ithegi yezinombolo enikezwe wonke amadivayisi axhunywe kwinethiwekhi ye-PC esebenzisa i-Internet Protocol ukudlulisa. Ikheli le-IP linikezela ngezinhloso ezimbili ezibalulekile: isikhombimsebenzisi senethiwekhi noma ukuhlonza umphathi nokusingathwa kwendawo.
Ikheli le-IP elinikezwe i-PC yinethiwekhi noma ikheli le-IP elinikezwe igajethi yenethiwekhi ngumthengisi womkhiqizo. Amathuluzi enethiwekhi asethwe ekhelini elithile le-IP elizenzakalelayo; ngokwesibonelo, ama-routers we-Linksys abelwe ikheli le-IP le- 192.168. 1.1
Uma ufisa ukuya endaweni emhlabeni uqobo, ucela ikheli layo bese ulifaka ku-GPS. Ngemuva kokufisa ukuya endaweni eku-inthanethi, uze ucele nekheli lalo, futhi ulibhala kubha ye-URL yesiphequluli sakho sewebhu osithandayo.
Indlela yokuthola ikheli le-IP elizenzakalelayo le-WIFI inikezwe ngezansi:
Wonke umenzi we-router unekheli le-IP lokungena lokuzenzakalelayo elibonakalayo ezansi kwehadiwe hardware. Uma ingafakwanga ilebula lapho, ngakho-ke ungayithola kudokhumenti noma kwimanuwali eza ne-router ngemuva kokuyithenga.
Uma i-ISP ikulungiselela ngomzila ngakho-ke izokutshela ngokuzenzakalela ikheli le-IP nama-ID ukungena ku-router bese ufaka i-Intanethi.
Ungathola kanjani igama lomsebenzisi nephasiwedi yokuzenzakalelayo?
Ama-ID wokungena okuzenzakalelayo angatholakala kwi-handbook ye-router efika ne-router ngemuva kokuyithenga kuqala nokuyixhuma.
Imvamisa, ngobukhulu bama-routers, ama-ID azenzakalelayo yiwo womabili “admin” kanye no- “admin”. Kepha, lokhu kukhonjwa kungashintsha kuye ngomenzi we-router.
uma ulahlekelwe yincwadi yesandla, khona-ke umuntu angathola ama-ID azenzakalelayo kuye i-hardware ye-router njengoba izophrintwa ngemuva komzila ngamunye.
Lapho sisebenzisa i-router, singashintsha ama-ID nganoma yisiphi isikhathi ukugwema ukungena okungekho emthethweni kunethiwekhi. Lokhu kuzokwenziwa ukusetha kabusha i-router futhi ufake ukhiye wokungena omusha njengokukhetha.
Ukusetha kabusha i-router kuphethe ukhiye wokusetha kabusha amasekhondi ambalwa futhi i-router izofakwa kabusha ekuzenzakaleni kwayo kwasekuqaleni kwemboni. Manje, ungaguqula izilungiselelo ezizenzakalelayo futhi usethe i-IDS yokungena oyikhethayo.
Amathuluzi wenethiwekhi aqondiswe kukheli elilodwa le-IP elizenzakalelayo; ngokwesibonelo, ama-Linksys routers ngokuvamile anikezwa ikheli le-IP le- 192.168.1.1. Ikheli le-IP elizenzakalelayo ligcinwa lingalimazi amaklayenti amaningi asengashintshwa ukuze afanele ukwakhiwa kwenethiwekhi okuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Vakashela isango elizenzakalelayo nekheli le-IP.
Igama elithi ikheli le-IP Router elizenzakalelayo lisho ikheli elithile le-IP router oxhunywe kulo futhi ozama ukungena kulo. Iyadingeka kunoma iyiphi inethiwekhi yebhizinisi noma yasekhaya.
The ikheli le-IP elizenzakalelayo umzila kubalulekile ukunweba kusixhumi esibonakalayo sewebhu ukuze ufinyelele iphaneli yokulawula nezilungiselelo zenethiwekhi. Ungavele ungene kuzilungiselelo zenethiwekhi zomzila ngemuva kokubhala leli kheli kusiphequluli sewebhu sebha yekheli.